Vamwe vagari vemuChinhoyi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nevezvitoro avo vari kuvabhadharisa mari yakawanda pazvinhu zvavari kutenga vachitora mukana wekushaikwa kwemari nekushomeka kwezvekudya muzvitoro.
Vagari ava vanoti zvitoro zvakaita seTM neOK hazvisi kuratidza mitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, shuga pamwe nemukaka sezvinotarisirwa nguva dzose.
Munhu anenge atora zvinhu zvaari kuda kutenga kubva mumatafura ezvitoro izvi anozoudzwa mutengo wezvaanenge achida paanenge ave kubhadhara pana till operator, izvo vakawanda vari kuti kubiridzira veruzhinji.
Mumwe mugari wemuChinhoyi, Amai Christine Mbonda, vanoti vashamisika nhasi muchitoro cheOK vachinzi vabhadhare mari inosvika dhora rimwechete nechidimu pamarita maviri emukaka uyo unoita dhora nemasendi gumi nemashanu chete.
Amai Mbonda vanoti vatengesi vave kuita zvechitsotsi kuti vawane purofiti yakawanda.
Izvi zvinotsigirwa naVaSam Mawawo avo vanoti kusaratidza mutengo wechinhu chiri kutengeswa chitsotsi chekukwidza mitengo zvisingabvumirwe.
VaMawawo vanoti neimwe nzira vemuzvitoro vanenge vachitya kusungwa nevanorwira kodzero dzevashandi.
Marita maviri emafuta ekubikisa anga achitengwa nemadhora matatu asi nguva dzamasikati anga ave kuita madhora matatu nemakumi masere emasenzi mukupera kwezuva.
Asi pasherefu paanga ari panga pasingaratidze kuti ari kumboita marii muchitoro cheTM muChinhoyi.
Sachigaro weZimbabwe Consumer Council, ZCC, Muzvare Rosemary Siyachitema, vanoti imhosva kumutengesi kusaratidza mutengo pachinhu chine nguva chichitengeswa.
Mukuru wekwaTM Chinhoyi, VaTafirenyika Meki, varamba kutaura nevatori venhau vachiti titaure nevakuru vavo vari kuHarare.
Hatinawo kukwanisa kunzwa divi reveOK.
Vanhu vakatanga kuita chipatapata mukupera kwesvondo vachitenga zvinhu zvinokosha zvakaita semafuta ekubikisa, shuga nezvimwe zvichitevera runyerekupe rwekuti zvinhu zvichashaika munyika.
Mumashoko aro kune veruzhinji, sangano reOil Expressers Association rinoti rinoda mari inoita makumi maviri emamiriyoni emadhora pamwedzi kuitira kuti rigadzire mafuta anokwanira nyika.
Sangano iri rati pari zvino riri riri kukwanisa kugadzira mafuta anosvika zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana, zvichirevera kuti pane zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvemafuta zvisiri kugadzirwa, izvo zviri kupa kuti munyika mushaikwe mafuta anokwanira nyika nyose.
Sangano iri rati izvi zviri kukonzerwa nemari yekunze iyo isiri kuwanikwa nyore, sezvo bhanga guru renyika riri kupa nhengo dzesangano iri mari shoma yekutenga zvinodiwa kunze kwenyika mukugadzira mafuta ekubikisa.
Asi mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanoti kushaikwa kwezvinhu kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kupidigura hurumende yavo.
Ukuwo sangano revashandi, re Zimbabwe Congress of Trade Unions, rinoti VaMugabe nehurumende yavo vanofanirwa kusiya basa nekuti vatadza kutonga.
Arthur Chigoriwa Anotipa Nyaya Iyi